Manchester City oo ka qaybgalaysa Champions League - BBC News Somali
Manchester City oo ka qaybgalaysa Champions League
25 Agoosto 2016
Image caption Taageerayaasha Man City ayaa Joe Hart u muujiyay taageero wayn
Gool haye Joe Hart ayaa sheegay in ay habeen qaali ah u ahayd kaddib markii uu Manchester City ka caawiyay in ay ka mid noqoto kooxaha ka qayb gali doona koobka Champions League, waxaana macquul ah in ciyaartaasi noqoto tiisii ugu dambaysay ee uu kooxda u safto.
Waxaa la filayaa in Hart uu uu booska u baneeyo Claudio Bravo oo qarka u saaran in uu kooxda ku soo biiro, balse taageerayaasha Kooxdiisa Man City ayaa u sacabaynayay intii ay socotay ciyaartaasi oo is aragii labaad ahayd ayna 1-0 kaga badiyeen naadiga Steaua Bucharest.
"Waxaan haysanaa tababare wayn aragtidiisa ayuuna ka dhiibani waxyaabaha qaar" ayuu sii raaciyay Hart, kaddib markii ay 6-0 ay ku soo dhamaatay isku darka natiijada labadii ciyaarood ee ay dheeleen.
Tababaraha City, Pep Guardiola ayaa isna sheegay in uu ogyahay in Joe uu halyay ka yahay kooxda.
Guardiola ayaa saddex-dii ciyaarood ee u horay ka reebay Hart, oo 29 jir ah balse kabtanimadii kooxda ayaa la siiyay ciyaartan.
Markii ay ciyaartu maraysay qaybtii labaadna garoonka Itixaad waxaa qabsaday sawaxan iyo hal kudhag ay taageerayaashu qaadayeen iyaga oo leh "istaag haddii aad jeceshahay Joe Hart"
Joe oo City ku soo biiray 2006-dii ayaa sheegay in ay habeen cajiib ah u ahayd, intii uu joogayna wuxuu kooxda kula guulaystay 2 koox oo horyaalka Ingiriiska ah, labo koob oo League Cup ah iyo hal koob oob FA ah.